हाइड्रोको ३१ लाख ८३ हजार कित्ता सेयर आउँदै - हाम्रो ईकोनोमी
हाइड्रोको ३१ लाख ८३ हजार कित्ता सेयर आउँदै
भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर प्रा.लि. ले ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको बुधबार सम्पन्न साधारणसभाले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३१ लाख ८३ हजार दुई सय ८० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
हाल ६५ करोड रूपैयाँ चुक्त्ता पूँजी रहेको भैरवकुण्डले चुक्ता पूँजीको ४८ दशमलव ९७ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको हो । जसमधये, एक प्रतिशत आयोजनका कर्मचारी, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरेर बाँकी सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०७३.७४ को नाफा नोक्सानसहित वार्षिक प्रतिवदन पारित समेत पारित गरेको छ ।
२०६६ जेठ २५ मा गते भैरवकुण्ड हाईड्रोपावर प्रा.लि र २०७३ असार १२ गतेबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को रुपमा दर्ता भएको यस कम्पनीले वि.सं. २०६५ साल मंसिर २९ देखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी गाविस–४ लार्चामा अवस्थित भैरवकुण्ड खोलामा निर्माण कार्य सुरुवात गरेको थियो ।
०६५ मंसिर २ गते पहिलो पटक एक हजार आठ सय ५० किवा र चैत्र २७ गते दोस्रो पटक एक हजार एक सय ५० किवाको लागि पिपिए गरी ०६६ भदौ १९ गते जेनेरेसन लाईसेन्स प्राप्त गरी ०७१ जेठ १८ गते सिओडी गरेको थियो ।